Maraykanka Iyo Ruushka Oo Midba Midka Kale Cuno-Qabateyn Ku Soo Rogay. - Wargeyska Faafiye
Maraykanka iyo Ruushka ayaa midba midka kale cuno-qabateyn ku soo rogay, ka dib markii ay isku fahmi waayeen muranka Gobolka Crimea ee biiray Ruushka.
Bayaano laga soo saaray labada aqal ee loog arimiyo labada dal ayaa lagu sheegay in midba midka kale xayiraad ku soo roogay saameyntiisa dhaqaale iyo siyaasaddeed ee labada waddan.
Arrintan ayaa ka dambeysay ka dib markii Madaxweyne Obama Khamiistii digmiin kama dambeys ah u diray dhigiisa Rushka Valdemir Puttin.
Ruushka ayaa dalkiisa ka madnuucay inay soo galaan sagaal sarkaal oo ka socda Maraykanka kuwaasoo kala ah afhayeen John A. Boehner oo ka mida xubnaha sinateka ugu jira Democratic , Senator John McCain oo laga soo dooro Arizona, iyo waliba xubin sare oo aqalka cad ka socda.
Madaxweynaha Maraykanka Brack Obama ayaa sheegay inay cadaadis dhaqaale saarayaan Dalka Maraykanka, kaasoo ay waddamada reer Galbeedku isku waafaqsanyihiin.
“Maraykanku waxa maanta uu qaadayaa talaabo sidii uu ugu soo rogi lahaa qarash dheeraad ah oo ku saabsan Russia, Kuwaasi waa doorashooyinka dhan in dowladda Ruush ayaa ka dhigay, doorashooyin in la diiday in bulshada caalamku.”
Obama ayaa intaasi ku daray in Shirkaddaha Tamarta ka soo dhoofiya Russia lacag dheeraad ah la saarayo, isla markaana ay suurto galba noqon karto in la joojiyo, iyadoo hab caalamiya loo waajahayo.
Hase ahaatee Afhayeen u hadlay Madaxweynaha Russia ayaa sheegay inaan la aqbali Karin cuno-qabateyn dhaqaale oo lagu soo rogo Ruushka, waxaanu intaasi ku daray inay taa bedelkeeda Moscow qaadanayso talaaabo cawaaqibkeeda leh.
Ruushka ayaa ku hanjabay inuu dhimayo dhaqaalaha uu siiyo wadamada xulafada Maraykan la ah, sida Koonfurta afrika iyo waddamo kale.
Labada waddan ee adduunka ugu quwada badan ayaa u muuqda kuwo haatan si cad isu muquuninaya oo midba midka kale doonayo inaanu debecsanaan u muujin.
Dalalka kale ee caalamka ayaa si weyn isha ugu haya xaaladaha isbedelaya ee ka socda dalka Ukraine iyo awoodaha kala taageersan dhinacyada dalkaasi u kala go’ay.
Filed in: .Warka, Faafiye Latest news. Tags: Mareekanka iyo Ruushka, Obama iyo putin
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsSouth Africa’s Mandela Spends Night in HospitalSanaag: Roobab dad ku dhintay.Safiirka Somalia ee Koonfurta SundanKenyan Police Stop Major Terror Attack.Somalia donor money 'goes missing'